A Star Is Born (2018) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Andrew Dice Clay, Anthony Ramos, Bradley Cooper, D.J. "Shangela" Pierce, Dave Chappelle, Lady Gaga, Michael Harney, Rafi Gavron, Rebecca Field, Sam Elliott
စင်ပေါ်မှာ မြူးကြွသံစဉ်တွေနဲ့ တစ်ပွဲပြီးတစ်ပွဲ
စင်ပေါ်မတက်ခင် backstage မှာ
အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့တစ်စုံတစ်ရာကို မေ့ပျောက်နေခဲ့ တဲ့ဂျက်ဆန်မိန်း
သူ့အတွက် အိမ်ဆိုတာ မရှိဘူး စွဲလန်းမက်မောမှု ဆိုတာလဲ
မရှိဘူး သူ့မှာရှိတာ ဂစ်တာ သူသိတဲ့ သူ့အပေါ်သစ္စာရှိတဲ့
သင့်အတွက် ရွေးချယ်စရာတွေ ပေးနှင့်ပြီးသားပါ
သာမည ဘားလေးတစ်ခု မှာ သိပ်လှတဲ့ စွမ်းအင်တစ်ခု
အံ့မခန်းသြချရတဲ့ သီချင်းတွေ ဆိုလာတဲ့
အယ်လီ လေ ပါရမီရှိပေမယ့် ယုံကြည်မှုမရှိလို့
ပတ္တမြားမှန်ရင်တော့ နွံမနစ်စတမ်းပါ အယ်လီ့ကို
တချိန်က အဖော်မဲ့နေတဲ့ သူ့ဂစ်တာနဲ့ စင်ထက်ကမိုက်လေးမှာ
ဂျက်ဆန် ဆေးရော အရက်ပါဆွဲနေခဲ့ပြီ
တဖက်မှာ လဲ အယ်လီက လေသလပ်လိုက်တဲ့
အချိန်မှ ဖြစ်တတ်စမြဲပဲလေ အချစ်ဆိုတဲ့ရသ
ဂီတရဲ့ ဝိညာဉ်ကို အကောင်းဆုံးဖော်ကျူး
ထားတဲ့ ကားလေးလို့ မြင်မိပါတယ်
ဂျက်ဆန်မိန်းတဖြစ်လဲ Bradley Cooper
အယ်လီတဖြစ်လဲ Lady Ga Ga ကသရုပ်
ဆောင်ပေးထားပါတယ် အခွီကားတွေပဲအရိုက်များတဲ့ Cooper
တစ်ယောက် အခုတော့ အဆွေးသီချင်းတွေ
Lady Ga Ga ကတော့
တစ်ခုပဲရှိပါတယ် အဲ့ဒါက သီချင်းတွေပါ
သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ သံယောဇဉ် သူတို့
နှစ်ယောက်ရဲ့ တွယ်တာမှု အတိမ်အနက်
ဘယ်လောက်ရှိလဲ ဆိုတာ သီချင်းတွေကပဲ
သီချင်းနဲ့ပေးချင်တဲ့ message သရုပ်ဆောင်
နှစ်ယောက်ရဲ့ acting ပိုင်း အံဝင်ခွင်ကျ
အတော်လေး ဖြစ်တယ်လို့ မြင်မိပါတယ်
ကြည့်မယ်ဆို ကျက်သီးပါ ထအောင်ကောင်း
Andrew Dice Clay Anthony Ramos Bradley Cooper D.J. "Shangela" Pierce Dave Chappelle Lady Gaga Michael Harney Rafi Gavron Rebecca Field Sam Elliott
Option 1 cloud.msubmovie.com 739 MB SD (480p)
Option2onedrive.live.com 739 MB SD (480p)
Option7drive.google.com 2.7 GB FHD AAC 6.1
Option9cloud.msubmovie.com 2.7 GB FHD AAC 6.1